Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Waqtiga ayaa ugu dambeyntii yimaado – haddii aad hadda jaamacad ka qalin jabiyay, waxaa cinwaan maqnaan aad fasaxa sannadlaha ah, ama go'aansaday in jaceylka ee safarka, dhulkiinnu midho ma lagu waayi karaa, aad dooratay in ay u safraan Europe tareen. Waa fikrad ka taataabtay, a trek traveled by…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo filimada Harry Potter ahaayeen ugu taxane film guul waqtiga oo dhan. Many of the scenes from the Harry Potter films were shot within London itself. Whether you are a die hard fan of the Harry Potter movie or book series, London is undoubtedly the…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Europe waa meel cajiib ah kulanka dhaqamada badan oo kala duwan - iyo caadooyinka, Kuliyadda. oo quruun waluba waxay leedahay aqoonsi oo kala duwan u gaar ah, oo barbar dhac kooxda martida ah xaq u galay taariikhda iyo wax kasta oo kale waxay bixisaa. Iyo dalal qaar ka mid ah, in sidoo kale ka dhigan cabitaanka flavorful! Kuwii…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Socotada la ilig macaan, fiiro gaar ah! Waxaad laga yaabaa in aan ku fikiray in ay ku safraan Europe oo keliya aawadood oo ah isku dayaya baxay macmacaan, laakiin waa in aad. Europe ayaa qaar ka mid ah macaan cajiib ah in aad soo dejin doonaa dhaw in ay dhaqanka ee dalka aad sahaminta….
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo U safarka arki indhaha waa doorasho weyn - laakiin waxa haddii aad kaliya doonayaan in ay leeyihiin xiiso leh? Haddii ay sidaa tahay, waxaa jira magaalo iyo cawayska ugu fiican, iyo helitaanka waxaa tareen waa wax fudud oo aan qaali ahayn. Waayo, xayawaanka xisbiga, ma jiraan wax jira…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo farshaxanka Street waa nooc casriga ah ee ra'yi dhiibashada farshaxanka dhigaya magaalooyinka dheeraad ah oo qurux badan. A kabarta jidka wanaagsan sidoo kale loo Waxyoodo ahayn laga yaabaa in aad ka fekerto maaddo bulsho muhiim ah ama idin xusuusiyo shuqullada sayid classical. Magaalooyinka Yurub waxaa ka buuxa…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Marka ay timaado in booqashada caasimadaha ugu caansan Yurub, London shaki la'aan waa ugu sareysa ee liiska dalxiis walba oo ay jiraan wax badan oo u sameeya london. Waxaa la helay muddo dheer ah, taariikh xiiso; durkiya qurux badan oo indhaha ku; and there’s plenty of things to…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Yurub qaarad ahaan waa mid aad u kala duwan, Europe waxay bixisaa wax nooc kasta oo ka mid ah socotada - qaniinyada delicious ka mid ah. Laakiin halka ay ku hari dhadhan loo farxay doonaa ugu? What meal pic will have your Instagram racking up 100’s of likes? Jooji yaabban iyo bilaabaan munching….